प्रहरी देख्न वित्तिकै मास्क ? – Nepalpostkhabar
प्रहरी देख्न वित्तिकै मास्क ?
नेपालपाष्ट खबर । १५ बैशाख २०७८, बुधबार १३:०३ मा प्रकाशित
जाजरकोट , १५ वैशाख ः प्रहरी देख्न वितिकै पकेटबाट मास्क झिकेर लगाउनेको संख्या ह्वातै बढेको छ । प्रहरीका लागि मास्क लगाइदिनु पर्ने झैँ गरि प्रहरीको निगरानी बढेपछि सवै खालका स्थानीयवासीहरु मास्क लगाउने गरेको पाइएको हो ।
भेरी करिडोर अन्तरर्गतका मुख्य सडक जाजरकोटको भूभाग भएर डोल्पा सम्म पुग्ने गर्दछ । यातायातका साधनमा सवार गर्ने मास्क लगाउन होसियारी देखिएपनि सडकमा हिडेर गनतव्यमा पुग्ने सर्वसाधारण मास्क लगाउन आनाकाँनी गरेको पाइन्छ । जिल्लाका सवै ठाउँमा प्रहरीको निगरानी हुन नसक्नु र अरुले भनेको खासै वास्ता नगर्दा मास्क लगाउनको संख्या कम भएको हो । गाउँ , गाउँमा सञ्चार माध्यमको पहुँच नहुँदा कोरोना विषयमा चाँहे जती जानकारी समेत नभएको सर्वसाधारणहरु बताउँछन् । कोरोना प्रभाव कम , विकास निर्माणको काममा खटिनेको संख्या भारी मात्रामा हुँदा सर्वसाधारणहरु ध्यान अन्यत्र मोडिएको छ ।
स्थानीय तहका मुकाममा मात्र कोरोनाबाट बच्ने ,जोगिने विषयमा चर्चा भएपनि गाउँमा चर्चा कम हुँदा कोरोना प्रति हेलचक्याइ बढेको पंञ्च भयार माध्यमिक विद्यालयका नलगाड नगरपालिका ८ का शिक्षक बीरबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“ अहिले मकै रोप्ने , धानको बीउ रोप्ने समय आएको छ , विकास निर्माणका काममा सर्वसाधारणहरु ब्यस्त छन् । कोरोनाको त्रास गाउँमा कम छ ।” जिल्लाको भेरी नगरपालिका , नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले कोरोनाका त्रासका कारण विद्यालय बन्द गरेपनि अन्य चार वटा स्थानीय तहमा अझै विद्यालय बन्द भएका छैनन् ।
जुनिचाँदे गाउँपालिकाका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको स्थानीय रेशम खड्काले जानकारी दिनुभयो । आज मात्र जाजरकोटमा ५७ जनालाइ कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले जानकारी दिएको छ ।
शिवालय –१ छेडावजारमा सामान्य मास्क लगाएको व्यक्तिको जाँच बाहेक अन्य केही काम हुँन नसक्दा सिमाना खटिने प्रहरी नै आफै असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । केही प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा पैसा उठाएर सर्वसाधारणलाइ मास्क वितरण गरिरहेका छन् । प्रहरी निगरानी हुने ठाउँमा मात्र मास्क लगाउने तर अन्य ठाउँमा मास्क प्रयोग नगर्दा कोरोनाको त्रास बढीरहेको देखिन्छ ।